Macalimiinta oo loo fasaxay in ay mamnuuci karaan Niqaabka | WWW.JUUNGAL.COM
← Xukuumadda Netherlands oo sheegtay inay dalkeeda ka mamnuucayso Jaadka oo ay Soomaali badan cunaan
Maxaa Kajira In Carlos Tevez Uu Wajiga Xanjo uga Tufay David Silva ,Muxuusa Silva Ka Aamin-sanyahay Carlos Tevez →
Hay’ada maamusha iskuulada (Skolverket) ayaa soo saartay go’aan u fasaxaya macalimiinta in ay iskuulka ka mamnuucaan ardada xiran niqaabka wajiga daboolaya ee ay xirtaan qaar ka mid ah gabdhaha Muslimiinta.
Arintaan ayaa ka dambeysay ka dib markii sanadkii 2009 ay labo gabdood dacwad ka gudbiyeen iskuul ku yaala xaafada Spånga ee Stockholm kuwaasoo loo diiday in ay iskuulka dhigtaan ka dibna Xeer ilaaliyaha cunsuriyada (DO) uu xukmiyay in gabdhahaas la cunsuriyeeyay. Waqtigaas ka dib ayaa Skolverket waxay bilaabeen in ay dib u eegeeyaan sharciga u yaala ee ku saabsan Niqaabka.
Xukunka cusub ayaa macalimiinta siinaya awooda ay ku go’aaminayaan in ardaygu niqaab xiran karo iyo in kale. Si kastaba ahaatee, macalimiinta ayaan awood u yeelan doonin in ay guud ahaan ardayga ka mamnuucaan iskuulka balse waxay sameyn karaan oo keliya in ay ka mamnuucaan fasalkooda.
Wasiirka waxbarashada Sweden Jan Björklund ayaa soo dhaweeyay go’aanka cusub isagoo sheegay in iskuulku uu yahay meel dadku ku wada xiriiraan oo wax la kala faaideysto isla markaana haddii ardaygu wajiga daboosho uusan ka qeyb qaadan karin xiriirka.
Hayada Skolverket ayaa sheegtay in ay muhiimtahay in la xushmeeyo xaqa ardadu ay u leeyihiin iskuulka sidaa darteedna aysan macalimiintu si fudud u isticmaali doonin sharcigaan. Sharciga cusub ayaa qaban doona goobaha waxbarashada dadka waaweyn iyo dugsiyada sare.